उत्सर्ग डान्सिङ स्टारको उपाधि आदर्शको हातमा – Pahilo Page
उत्सर्ग डान्सिङ स्टारको उपाधि आदर्शको हातमा
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका– १५ दीपशिखारोडका १२ वर्षीय आदर्श योगीले उत्सर्ग डान्सिङ स्टार ४ को उपाधि हात पारेका छन् । राप्ती क्षेत्रको सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित नृत्य प्रतियोगिताको रुपमा स्थापित उत्सर्ग डान्सिङ स्टारको सिजन ४ को मंगलबार घोराहीमा भएको फाइनलमा उनले उपाधिसहित ५० हजार नगद हात पारेका हुन् । उनी गुरुकुल एकेडमीमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छन् ।
उत्सर्ग फिल्मस नेपालले आयोजना गरेको सो प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधिका लागि १२ जनाले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा भालुवाङकी एलिसा पुन मगरले फस्ट रनर अपको उपाधि जितेकी थिइन् । उनलाई ट्रफीसहित रु. २० हजार प्रदान गरिएको थियो । उनले वेस्ट ड्रेस अप अवार्ड पनि जितिन् । प्रतियोगिताकी सबैभन्दा सानी प्रतिष्पर्धी तुलसीपुरकी प्रेक्षा रेग्मीले सेकेण्ड रनर अपसहित पब्लिक च्वाइस अवार्ड हात पारिन् । उनलाई ट्रफीसहित रु. १० हजार नगद प्रदान गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताको फाइनलमा ७० प्रतिशत नृत्य र ३० प्रतिशत भोटको आधारमा उपाधिका लागि प्रतिष्पर्धा गराइएको थियो । नृत्यको आधारमा मात्र गरिएको मूल्याङ्कनमा घोराही गिठेपानीकी यमुना कुवरले सर्वाधिक मतसहित सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा अवार्ड हात पारेकी थिइन् । त्यसैगरी चाँदनी जीएम, संहिता अधिकारी र मनिषा थापाले विशिष्ट प्रतिभा अवार्ड हात पारेका थिए भने शुष्मा विक, रिया राना र सुदीक्षा सिंहले अनुशासन अवार्ड प्राप्त गरेका थिए । भालुबाङकी चाँदनी विकले बेस्ट फ्रेण्डसीप अवार्ड जितिन् । प्रतियोगिताको निर्णायकमा मोडल एवं नायक बिनोद श्रेष्ठ र नृत्य प्रशिक्षक सुष्मा केसी रहेका थिए ।
उत्सर्ग फिल्मस् नेपालकी एम्बेस्डर एवं पूर्व स्टार समीक्षा पौडेलको अध्यक्षता र गायक, संगीतकार एवं लोक संस्कृतिविद डा. गोबिन्द आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको फाइनल कार्यक्रममा वरिष्ठ लोकगायिका कोमल वलीलाई १५ हजार नगद सहित उत्सर्ग राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार र संचारकर्मी केशरमान बुढाथोकीलाई ५ हजार नगदसहित उत्सर्ग रंग पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, कार्तिक ०७, २०७४ समय : २२:५८:०५ 503 पटक पढिएको